Uluqala njani uxwebhu lwakho ngenani lephepha elahlukileyo kwiLizwi 2013
iziphumo ebezingalindelekanga zepilisi yeprogesterone
Siyazi ukuba iphepha lokuqala loxwebhu liphepha 1, kodwa iLizwi 2013 alikhathali. Ikuvumela ukuba uqale ngokubala uxwebhu lwakho nokuba leliphi na inani lephepha olifunayo. Kuya kufuneka uqale ngenombolo yephepha ngaphandle kwe-1. Ukuba ufuna ukuqala ukubala uxwebhu kwiphepha lama-42, ungakwenza oko, ukuba ulandela le miyalelo:
1Cofa Faka ithebhu.
Ukhetho lwakho lokufaka luza kuvela.
MbiniKwiNdawo yokubhaliweyo ephezulu kunye nasezantsi, khetha iNombolo yePhepha → Fomatha iinombolo zamaphepha.
Ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yamanani ephepha.
3Cofa kwindawo yokuqala kwirediyo, kwaye uchwetheze inombolo yokuqala kwiphepha.
Igama liqala ukubala inani lamaxwebhu akho kwiphepha elichaziweyo. Ke ukuba ufaka i-47 kwiNyathelo 3, iphepha lokuqala loxwebhu ngoku liphepha le-47, iphepha elilandelayo liyi-48, njalo njalo.
Uxinzelelo lwegazi oluyi-140/100
4Cofa u-Kulungile ukuvala ibhokisi yencoko yababini beFomathi yeNombolo.
Ukulawula inani elingakumbi lephepha, njengokucinezela inani lephepha kwiphepha lokuqala loxwebhu okanye ukuba nenombolo yephepha tsiba embindini woxwebhu, usebenzisa amacandelo. Izitayile ezahlukeneyo zokubala amanani okanye ulandelelwano zinokusetwa ngokwamacandelo ngamanye.
iHeparin igungxula izibuko
Guqula i-cd mp3 kwiwindows 10
ithatha ixesha elingakanani i-hyoscyamine
zingaphi ml kwi tbsp